क्यान्सरबाट जोगिन के खाने ? - IAUA
क्यान्सरबाट जोगिन के खाने ?
ramkrishna November 10, 2016	क्यान्सरबाट जोगिन के खाने ?
काउली–परिवारका सबै तरकारीमा क्यान्सरनिरोधी गुण बढी पाइने गरे पनि ब्रोकाउलीमा यसको मात्रा सबैभन्दा उच्च हुन्छ । ब्रोकाउलीमा सल्फोराफेनको मात्रा अधिक हुन्छ । यसले क्यान्सर लगाउने, ट्युमर बढाउने शरीरभित्रका रसायनलाई निस्तेज गर्छ । ब्रोकाउली खाइरहनाले स्तन, कलेजो, फोक्सो, प्रोस्टेट, छाला, पेटलगायतका क्यान्सर हुने जोखिम कम हुन्छ ।
स्ट्रबेरी, किम्बु, काफलजस्ता मसिना आकारका फलफूलमा क्यान्सरविरुद्ध लड्ने फाइट्रोन्युट्रियन्ट्स तत्व प्रशस्त हुन्छ । यसले शरीरका अंग विशेषमा क्यान्सरका कोषिकाहरूको विकास र विस्तारलाई रोक्ने काम गर्छ । साथै, रक्तकोषिका तथा धमनीमा क्यान्सरमुखी रसायनको विकासलाई पनि यसले कम गरिदिन्छ । यस्ता फलफूल खाइरहने गर्नाले आमाशय, मुख र छालाको क्यान्सर लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
गाढा हरियो रंगका तरकारीको सलाद खानु क्यान्सरको जोखिम हटाउने दृष्टिकोणले बढी लाभदायक हुन्छ । गाढा हरियो तरकारीमा क्लोरोफिलको मात्रा बढी हुन्छ र यस्ता तरकारी खाँदा शरीरमा म्याग्नेसियमको आपूर्ति बढ्न जान्छ । म्याग्नेसियमले क्यान्सरका जीवाणुलाई कमजोर पार्ने र नयाँ स्वस्थ कोषिकाको विकासका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने गर्छ ।
Previous Previous post: काउली: क्यान्सर रोक्नेदेखि बनाउँछ हड्डी दह्रो
Next Next post: १४ तस्वीरमा हेर्नुहोस् राष्ट्रपति ट्रम्पका रिल्याक्स जीबनशैली